ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း COVID-19 ပြန့်ပွားမှုနှင့်အတူအကာအကွယ်ပစ္စည်းမျိုးစုံသည်အရေးပါသောအခန်းကဏ္မှပါ ၀ င်လာသည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမျက်နှာဖုံးများမှဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကာအကွယ်အ ၀ တ်များနှင့်မျက်နှာအကာများအထိဗိုင်းရပ်စ်ကိုဘက်စုံပိတ်ဆို့ခြင်းသည်လူအများစုအတွက်ခက်ခဲသောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်ပုံရသည်။ ဒီနေ့ငါမိတ်ဆက်မယ် ...
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းသည်ပိုမိုနက်ရှိုင်းကျယ်ပြန့်သော ဦး တည်ချက်ဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးလာသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိလူများသည်ပိုမိုနီးကပ်စွာဖလှယ်မှုများရှိသည်၊ ဒေသတွင်းစီးပွားရေးမှီခိုမှုပိုမိုနီးကပ်လာသည်၊ နိုင်ငံတကာခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလည်းမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်လာသည်။ အရှိန်အဟုန်ဖြင့်တိုးတက်လာသောဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းသည် ...
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွင်အောက်ဆီဂျင်အာရုံခံထုတ်ကုန်များအများအပြားပေါ်ထွက်လာသည်၊ ထို့ကြောင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအောက်ဆီဂျင်စုစည်းစက်နှင့်အိမ်သုံးအောက်ဆီဂျင်စုစည်းစက်အကြားခြားနားချက်ကိုသင်သိပါသလား။ စျေးကွက်တွင်အောက်ဆီဂျင်ဂျင်နယ်နှစ်မျိုးရှိသောကြောင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအောက်ဆီဂျင်ဂျင်နရေတာများ ...
တစ်ခါသုံး nitrile လက်အိတ်နှင့်တစ်ခါသုံးစေးလက်အိတ်များကွာခြားချက်ကဘာလဲ။
တစ်ခါသုံး nitrile လက်အိတ်များ (သို့) latex လက်အိတ်များဖြစ်စေ၎င်းတို့သည်နေ့စဉ်ဘ ၀ နှင့်အလုပ်တို့တွင်အလွန်တွေ့ရများသည်။ အသွင်အပြင်ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်၎င်းတို့နှစ် ဦး ကြားအရောင်ကွဲပြားမှုသာရှိပုံရသည်။ Nitrile လက်အိတ်များသည်ယေဘုယျအားဖြင့်အပြာရောင်ဖြစ်ပြီးအစေးလက်အိတ်များသည်ယေဘူယျအားဖြင့်နို့ရည်ဖြူဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ဘို ...
ဆေးထိုးအပ်သည်အသုံးများသောဆေးပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ၁၅ ရာစုအစောပိုင်းတွင်အီတလီ Catinel သည်ဆေးထိုးအပ်၏အခြေခံမူကိုအဆိုပြုခဲ့သည်။ ဆေးထိုးအပ်ကိုဓာတ်ငွေ့ (သို့) အရည်ဖြင့်ဆွဲရန် (သို့) ထိုးရန်အဓိကအသုံးပြုသည်။ ဆေးထိုးအပ်များကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးအဆောင်များ၊ ကွန်တိန်နာများနှင့်အချို့သော chromatogr ကဲ့သို့သိပ္ပံနည်းကျတူရိယာများတွင်လည်းသုံးနိုင်သည်။
Foam roller သည်အားကစားဝါသနာပါသူများသုံးလေ့ရှိသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အပန်းဖြေခြင်းသို့မဟုတ်ပြည့်စုံသောလေ့ကျင့်မှုအတွက်သုံးသည်။ တုန်ခါမြှုပ်စက်သည်လေ့ကျင့်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်မူလအခြေခံတုန်ခါမှုလုပ်ဆောင်ချက်ကိုတိုးစေသည်။ အသုံးများသောနည်းလမ်းများ 1. ခြေသလုံးကြွက်သားကြွက်သားများမြေကြီးပေါ်တွင်ထိုင်ပါ။
နဖူး၏သာမိုမီတာ (အနီအောက်ရောင်ခြည်သုံးသာမိုမီတာ) သည်လူ၏နဖူးအပူချိန်ကိုတိုင်းတာရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုရန်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးအဆင်ပြေသည်။ ၁ စက္ကန့်အတွင်းတိကျသောအပူချိန်တိုင်းတာမှု၊ လေဆာမပါ၊ မျက်လုံးထိခိုက်ပျက်စီးမှုကိုရှောင်ကြဉ်ပါ၊ လူ၏အသားကိုထိရန်မလိုပါ၊ ဖြတ်ကူးခြင်းကိုရှောင်ပါ။
Advanced Intelligent Systems (AIS) သည် modular autonomous robots များမှတစ်ဆင့်စက်မှုအခက်အခဲများကိုဖြေရှင်းပေးသော custom custom robot engineering ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆေးကုမ္ပဏီများသည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၌အန္တရာယ်ရှိသောဘက်တီးရီးယားများနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်များကိုဖယ်ရှားရန်အောင်မြင်စွာကြေငြာခဲ့သည်။
ပိုးသတ်ဆေးနှင့်ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ရေးစက်ရုပ်ကိုပိုးသတ်ဆေးစက်ရုပ်ဟုအတိုကောက်ခေါ်သည်။ စက်ရုပ်သည်သယ်ဆောင်သူဖြစ်သည်။ ပိုးသတ်ဆေးကိုပိုးသတ်နိုင်သောဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်ရန်စက်ရုပ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်။ စက်ရုပ်၏ pneumatic system ကို indoor spa ၌ပိုးသတ်ဆေးများလျင်မြန်စွာပျံ့နှံ့စေရန်အသုံးပြုသည်။
အိန္ဒိယ၏ရုတ်တရက်အကြီးစား ၀ ယ်ယူမှုများ၊ ပြည်တွင်းအောက်ဆီဂျင်စုစည်းစက်များသည်အလျင်စလိုဖြစ်ခဲ့သည်
TASS ၏မေလ ၂၅ ရက်အစီရင်ခံစာအရကပ်ရောဂါကြောင့်အိန္ဒိယသည်တရုတ်ကုမ္ပဏီများမှအကြီးစားအောက်ဆီဂျင်စုပ်စက်များ ၀ ယ်ယူခဲ့သည်။ ပုံမှန်အခြေအနေများတွင်အောက်ဆီဂျင်စုစည်းစက်လိုအပ်မှုသည်အတော်လေးတည်ငြိမ်နေပြီးအိန္ဒိယတွင်အံ့အားသင့်ဖွယ်ဝယ်ယူမှုသည်တရုတ်ကုမ္ပဏီများကိုဖမ်းစားခဲ့သည်။
ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၌အနီအောက်ရောင်ခြည်အပူချိန်တိုင်းတာသည့်နည်းပညာသည်ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုနှင့်စောင့်ကြည့်မှုတွင်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။ လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၂၀ အတွင်းအဆက်အသွယ်မရှိသောအနီအောက်ရောင်ခြည်သုံးလူ့ကိုယ်အပူချိန်တိုင်းကိရိယာသည် ...
Novel Coronavirus အတွက်စမ်းသပ်ကိရိယာအစုံ၏စစ်ဆေးခြင်းအခြေခံမူများ
(IgM antibody ကိုဥပမာအဖြစ်ယူပါ) 1. Colloidal gold method (ဥပမာအားဖြင့်သွယ်ဝိုက်သောနည်းလမ်းကိုယူပါ) coronavirus အသစ် (2019-nCoV) ၏ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနိယာမသည် IgM antibody detection detection kit (colloidal gold method) ကို mouse anti ဟုတံဆိပ်ကပ်ထားသော colloidal gold ဖြစ်သည်။ လူသား IgM နှင့် coronavirus antigen အသစ်သည် ...